UZondo uthi akekho umuntu ongaphezu komthetho ngakho uZuma kumele avalelwe ejele | Scrolla Izindaba
UZondo uthi akekho umuntu ongaphezu komthetho ngakho uZuma kumele avalelwe ejele
“Ikhomishini izocela iNkantolo yoMthethosisekelo ukuthi ibeke isikhathi sokuvalelwa ejele kukaMnu Zuma uma imuthola enecala lokudelela inkantolo,” kusho iPhini leNhloko yamaJaji uRaymond Zondo. Uthe akekho umuntu ongaphezu komthetho futhi akakwazi ukuvumela ukuthi kube khona isibonelo.
Inkantolo ingakhokhisa inhlawulo noma isikhathi esithile evalelwe ejele.
UZondo uveze ukuthi uJacob Zuma ufunge amahlandla amabili ngesikhathi efungiswa njengoMengameli ukuhlonipha nokuvikela uMthethosisekelo futhi kufanele abe yisibonelo.
NgoMsombuluko, uZuma wephule isinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo sokuba avele phambi kophenyo lombuso.
“Ikhomishini izofaka isicelo eNkantolo yoMthethosisekelo bese ifuna umyalelo wokuthi uMnu Zuma unecala lokweyisa inkantolo,” kusho uZondo ngemuva kokuthi lowo owayengumengameli ehlulekile ukufika njengoba ayeyalelwe yinkantolo.
Ngemuva kokukhishwa kukaZuma ngokungemthetho kwikhomishini ngonyaka odlule – wahamba ngaphandle kwemvume kaZondo, njengoba kudingeka ukuba kubenjalo ngokomthetho – nokwehluleka kwakhe ukuhlonipha isamanisi yokuba avele ngoMasingana, manje ubekwe amacala amabili obugebengu.
Kube nofakazi abangaphezu kwabangama-40 abathi uZuma uyabandakanyeka kulamacala, kusho umholi wobufakazi wekhomishini uPaul Pretorius ngoMsombuluko, futhi ubufakazi bakhe ngalokho buyikho.
Lowo owayengumengameli wayalelwa yiNkantolo yoMthethosisekelo ukuthi ahloniphe isamanisi lokuthi evele kwikhomishini kuleli sonto.
Emasontweni amabili edlule uZuma wathi uzophikisana nale miyalo.
Ummeli kaZuma u-Eric Mabuza wazise ikhomishini ngoMsombuluko ekuseni ukuthi lowo owayengumengameli uzobe engekho.
Khonamanjalo, abantu abathi bangomakadebebona boMkhonto weSizwe (yize abaningi bekucaca ukuthi basebancane kakhulu) bebelokhu behambela futhi bedansa ngaphandle komuzi kaZuma oseNkandla e-KZN.